नोबेल जिताउने 'जैविक घडी' जसले हाम्रो निद्रा, स्वभाव र यौन व्यवहार निर्धारण गर्छ
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, असोज २५
घडी वैज्ञानिक यन्त्र हो? कि, हाम्रो जैविक अंग?
तपाईंलाई लाग्ला, यो कस्तो प्रश्न हो!
हामीले नाडीमा बाँधेर हिँड्ने वा भित्तामा झुन्ड्याउने घडी, जसले हामीलाई प्राकृतिक समयसँग डोरिन सघाउँछ, त्यो त निश्चित रूपमा वैज्ञानिक यन्त्र हो, डच वैज्ञानिक क्रिश्चियना ह्युगिन्सले १७ औं शताब्दीमा आविष्कार गरेको।
यस वर्ष चिकित्साशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार पाउने तीन वैज्ञानिकले भने यस्तो घडीबारे शोध गरेका छन्, जुन हाम्रो शरीरभित्र हुन्छ।
कहाँ हुन्छ त त्यो ‘जैविक’ घडी हाम्रो शरीरमा? के कुनै एक्सरे मेसिनले मुटु, कलेजो र फोक्सोजस्तै त्यसको स्वरुप उतार्न सक्छ? के हामी त्यसलाई छाम्न सक्छौं? त्यो हुनुको अनुभूति लिन सक्छौं?
नोबेल विजेतात्रय जेफ्री सी हल, माइकल रसब्यास र माइकल डब्लू यङले चर्चा गरेको त्यो ‘जैविक’ घडी खासमा हाम्रो शरीरभित्र हुन्छ पनि, र हुँदैन पनि।
हुन्छ यस कारण, किनकि हाम्रो जीवन पूर्ण रूपमा त्यही घडीले निर्देशित गर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण क्रियाकलाप त्यही घडीको सुईअनुसार घुम्छ।
र, हुँदैन यस कारण, किनकि त्यो जैविक घडी न हामी नांगो आँखाले देख्न सक्छौं न त कुनै एक्सरे मेसिनले त्यसको स्वरुप प्रिन्ट गर्न सक्छ।
नोबेल विजेता वैज्ञानिकहरूले आफ्नो शोधमा चर्चा गरेको घडी वास्तवमा जैविक प्रक्रिया हो, जसले हाम्रो शरीरलाई निश्चित समयक्रममा बाँधेर राख्छ। जसरी घाम झुल्कनु, टन्टलापुर चर्किनु र बेलुकी शितलसँग अस्ताउनु प्राकृतिक समयक्रम हो, हाम्रो शरीरलाई त्यस्तै एउटा जैविक समयक्रमले निश्चित गतिमा घुमाइराख्छ। वैज्ञानिकहरूले यही प्रक्रियालाई ‘सरकाडियन रिदम’ भनेका छन्।
यो जैविक समयक्रम बुझ्न सबभन्दा पहिला हामीले आफैंलाई नियाल्नुपर्छ। अनि हामीले थाहा पाउनेछौं- हामीलाई लाग्ने निद्रा, रोग र हाम्रो यौन व्यवहार यो घडीले निर्धारण गर्छ।
[caption id="attachment_95154" align="alignnone" width="825"] तस्बिरः न्यू एटलास डट कम[/caption]
सुरुआत हाम्रो निद्राबाट गरौं।
निद्राले आँखा झप्झपाउनु र केही घन्टाको सुताइपछि शरीर तंग्रिनु नियमित प्रक्रिया हो। सबै मान्छेको सुताइ एकनास हुँदैन। कोही बिहान चाँडै उठ्ने स्वभावको हुन्छ, कोही जति कोशिस गर्दा पनि सबेरै उठ्न सक्दैन। कोही राति दस बज्दा–नबज्दै आँखा झुपुझुपु बटारिएर झुल्न थाल्छ, कोही मध्यरातसम्म जाँगरिलो र फुर्तिलो रहन्छ। कसैले एकाध दिन आफूलाई बदल्न त सक्ला, तर केही समयपछि नियमित चक्र फर्किहाल्छ।
मान्छेको यो फरक–फरक सुताइ निर्देशित गर्ने त्यही ‘सरकाडियन रिदम’ ले हो– हाम्रो शरीरभित्र हुने अदृश्य जैविक घडीले।
निद्राका आधारमा मान्छेको जैविक घडी तीन किसिमले चल्छ।
पहिलो, कोही मान्छे बिहान चाँडो उठ्छ र दिनभर जाँगरिलो–फुर्तिलो रहन्छ, भँगेराभन्दा अलि ठूलो जातको ‘लार्क’ चराजस्तो, जसलाई नेपालीमा ‘भारद्वाज’ भनिन्छ।
बेलायतका निद्रा विशेषज्ञ जीम होर्नका अनुसार प्रत्येक ६ जनामा एक–एक जना भारद्वाज र उल्लू स्वभावका हुन्छन् भने बाँकी ४ जना यी दुवैको छेउछाउ पर्छन्।
मान्छेको जैविक समयचक्र ऊ जन्मिएको समयसँग सम्बन्धित हुने वैज्ञानिक शोधले देखाएको छ। अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानअनुसार बिहान जन्मिएका विद्यार्थीले बिहान लिइएको ‘आइक्यू’ परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएका थिए भने दिउँसो वा साँझ जन्मेकाले दिउँसो राम्रो गरेका थिए।
[caption id="attachment_95134" align="alignnone" width="717"] तस्बिरः डेलिमेल डट कम[/caption]
हृदयघात र मधुमेह
[caption id="attachment_95132" align="alignnone" width="1000"] तस्बिरः प्रिभेन्सन डट कम[/caption]
‘सरकाडियन रिदम’ को सम्बन्ध मान्छेको यौन व्यवहारसँग पनि हुन्छ। महिला र पुरूषमा यौन सम्पर्क गर्ने चाहना फरक–फरक समयमा देखिनुले यो सम्बन्ध पुष्टि गर्छ।
‘हाम्रो शरीरका सबै क्रियाकलाप जैविक घडीकै आधारमा तय हुन्छ,’ नोबेल विजेता तीन वैज्ञानिकमध्ये रसब्यास भन्छन्, ‘हामीले यो घडीको चाल बुझ्नुपर्छ र यसको इसारालाई सम्मान गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २६, २०७४, १०:००:१२